Madaxweynaha Soomaaliya iyo Dhigiidsa Dalka Masar oo Kulan ku Qaatay Magaalda Kigali ee Dalka Ruwanda
July 18, 2016 – Madaxweynaha dalka Soomaaliya mudane, Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa kulan gooni ah kula qaatay Magaalada Kigali ee dalka Ruwanda Madaxweynaha dalka Masar Abdel Fattah El-Sisi, iyadoo labada dhinac ay ka wada hadleen arimaha labada dal.
Sida laga soo xigtay Afhayeenka Madaxweynaha dalka Masar Calaa Yusuf, ayaa sheegay in Dowladda Masar ay u balan qaaday Dowladda Soomaaliya sii wadista iyo taageerada ku aadan taakuleynta iyo sidii xasilooni loogu soo dabaali lahaa dalka Soomaaliya.
Madaxweyne El-Sisi ayaa dhigiisa Soomaaliya u sheegay in mar waliba taageerada Soomaaliya ay siiyaan ay tahay mid ay ku doonayaan inay ku soo noqoto xasiloonidii iyo kala dambeyntii dalka Soomaaliya uu lahaan jiray.
Madaxweynaha Somaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa kaga mahad celiyay Madaxweynaha Masar, taageerada Dowladiisa mar waliba ay la garab tagan tahay Dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed.
Wuxuu sheegay Soomaaliya inaysan aheyn sidii ay ahaan jirtay sanado ka hor, islamarkaana dalka hada uu yahay mid amniga, kaabayaasha Dhaqaalaha iyo horumaro kala duwan ku tilaabsanaya.
Madaxweyne Xasan Shekh Maxamuud ayaa Magaalada Kigale ee dalka Ruwanda kaga qaybgalaya Shir Madaxeedka Wadamada qaaradda Afrika ee iminka ka socda Magaalada Kigali ee dalka Ruwanda.
July 18, 2016 tuugahaladilo2015
Wasiirka Cusub ee Arrimaha Dibada oo Maanta soo Gaaray Magaalada Muqdisho (SAWIRRO) January 7, 2018
Diyaarad Maanta ku soo Dhacday Garoonka Diyaaradaha ee Magaalada Garbahaareey June 3, 2017
Daacishta Soomaaliya oo Soo Bandhigtay Sawirka iyo Magaca Ninkii Isku Qarxiyay Magaalada Boosaaso (VIDEO) May 26, 2017